Nhau - 2019 Girazi -Tech International Door & Window Exhibition Mexico
2019 Girazi -Tech International Door & Window Exhibition Mexico
June 2019 Mexico International musuwo uye hwindo Exhibition Doors & Windows MEXICO inoitirwa kuMexico City. Kuratidzira uku kunopenengudza nyika dzese dzeCentral neSouth America uye kunopa nzira mbiri dzekutengeserana indasitiri yegirazi muMexico nenyika dzayo dzakatenderedza kuSouth America. Yedu FOEN timu yedhiri rekunze yakaita chitarisiko chakanakisa nekambani nyowani dzakagadzirwa zvigadzirwa nemusuwo & hwindo tekinoroji mhinduro.
Fujian Fenan Aluminium Co, Ltd yakaratidza masisitimu ehurongwa hwayo nemahwindo, paine yakakwirira mhepo, kushomeka kwemvura, kupisa kupisa, kufambisa inzwi uye kumwe kuita kwakanyanya, pamwe neanti-moshi, anti-kubiwa, anti-kudonha nezvimwe. mabasa akasimba-akasimba. Inokwezva rwukova rusingaperi rwevaratidzi kushanya uye kuchinjana iwo pfungwa. Pakati pavo, hapana kushayikwa kwevakakwira kwakakwirira kwekuremekedza avo vanopa huwandu hwakanyanya hwekuzivikanwa kune hunyanzvi hweFOEN, uye kukurudzira FOEN kuti irambe ichitungamira mberi mweya wehunyanzvi, ita zvimwe chikamu mukusimudzira kusuo & hwindo indasitiri.
Foen iri Nemakore makumi matatu nemakumi mairi tekinoroji & Zvakaitika, isu takavambwa mu1982 semuparadziri wealuminium chimiro. Munguva yemakore gumi ekutanga, Takapinda mumusika uye ruzivo rwe bulit. Muna 1998, Yakatanga yekutanga chigadzirwa FOEN Stainless Simbi fekitari muFuzhou City. Yakapedza Fuqing Aluminium profil yekugadzira chigadziko muna 2005. Muna 2012, takahwina top 20 aluminium profil suppliers muChina, muna 2013, takaisa iyo yakakurisa World vertical anodized mutsara mukugadzirwa. Muna 2014, akaiswa pamusoro gumi Aluminium vatengesi muChina. Muna 2015, Gadza Smart hwindo system yekutanga. Muna 2016, Got FOEN kugadzira chigadziko kuNorth kushanda. Muna 2017, FOEN hwindo system Art Gellary yakavhurwa uye Henan FOEN aluminium fekitari yakatanga. Muna 2018, takakudzwa neChina mazana mashanu emhando dzakakosha. Mwaka uno wechitatu aluminium gadziriso chigadzirwa chiri kuvakwa.
Mune ramangwana, Isu FOEN, nehunyanzvi uye kufambira mberi kwehunyanzvi hwechigadzirwa, hunyanzvi hwepamberi hwepamusoro hwekutungamira mazano uye zviwanikwa, Ramba uine maitiro emusika, gara uchivandudza vatengi kugutsikana, kuitira kuti kambani irambe iripo kuvandudza garandi yakasimba, Fujian Fenan Aluminium Co, Ltd ichaisa yakakwirira mhando yemhando pachiyero chakakura chenyika.